Wildlife Tours Odisha | Ongorora Fora uye Zvipenyu - 993.702.7574
Kurwendo rwemhuka yehupenyu Odisha neSandpebbles - Chiitiko chakasikwa nemasikirwo, Flaura uye Fauna aOdisha.
Ndichitsvaga mhuka chaiyo yemhuka yakasango? Wildlife Tours Odisha ndiyo yako yekupedzisira yekushanyira!
Kunyange zvazvo mabhesi nematemberi vakatora imba yeBonon kuti vazivikanwe, Wildlife Tours Odisha inoshamisa kuti iwane. Neboka remapaki emunyika, nzvimbo dzekutora, uye nzvimbo dzekuchengetedza zvikara, nyika yakanyatsogadzirisa zvipenyu zvezvipenyu nemafuta zvausingawani kune imwe nzvimbo munyika. Ive iyo Mangrove Forests & Wetland yeBhitarkanika kana masango eChandaka, nhengo dzose dzekumaodzanyemba kweIndia dzinosangana nemhuka dzakasikwa dzepanyika.
PaOdhaya yako yeWallife Tours , iwe unowana mukana wokuona mhuka dzichifamba-famba munzvimbo dzadzo dzisina kuonekwa, teerera inzwi razvo uye unzwe kuti mwoyo wako unomuka uchifara. Pano, iwe unogona kuona mazana ezvisikwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira tiger, nzou, nguruve, nondo, jackal, nezvimwe zvakawanda munzvimbo yavo yepanyama.
Nzvimbo Yedu Yezvokufema Kwemhuka Odisha purogiramu yakagadzirirwa kune zvaunofarira uye inopa mukana wokuona zvakanakisisa zvemhuka dzesango izvo nyika inofanira kupa.
ZUVA 01: Kusvika Bhubaneswar
Kusvika paBhubaneswar Airport / Railway Station uye kutamira kune hotera. Masikati mashanyira kutemberi ye Lingaraj, Khandagiri Udayagiri Jain Caves. Manheru asingabhadhari paEkamra Haat Dinner uye Manheru kuBhubaneswar.
ZUVA 02: Bhubaneswar - Satkosia
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaSatkosia neAngul Tora chikepe chekutambira paSatkosia Gorge uko unogona kuonana naMugger uye Gharial akawanda pamhenderekedzo yejecha. Masikati manheru achifamba munzira yakasikwa. Kudya uye Husiku paSatkosia.
ZUVA 03: Satkosia - Bhitarkanika
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya Bhitarkanika. Tarisa kuInzvimbo Yedu yeChirangaridzo. Pashure pekudya kwakanaka kwemazuva ekudya kwemazuva okuenda kuKalibhanja Diha Island kumhenderekedzo yegungwa yakagamuchirwa neDhipatimendi reWallife, kuti unakidze panoramic nzvimbo yeRamsar. Manheru anoshanyira temu yeJagannath kuti atore muParamende Aalati Darshan. Mamwe manheru anofarira moto wemoto neScacks uye Dinner. Usiku huno paSandle Pebbles Jungle Resorts.
ZUVA 04: Bhitarkanika
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwemafuro emusha, inoshanyira kunzvimbo yeChirungu, kuenda kunhare yekuvhima yeAkare King, kuenda kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana kumhenderekedzo yegungwa rakagamuchirwa neDhipatimendi reWorlife, kuti uone nguruve. Mushure mekudya kwemazuva masikati kunoshanyira museum uye nzvimbo yeprojekiti. Mamwe manheru anofarira moto wemisasa neScacks uye Dinina. Overnight at Sandra Pebbles Jungle Resorts.
ZUVA 05: Bhitarkanika - Similipal
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwemusha kunoshanyira Similipal Tiger Reserve. Tarisa-ku hotera. Mushure mekudya kwemazuva masikati kufamba uye chimiro chekudzidza pamishonga yemishonga, shanyira kuCrocoary breeding farm. Kudya uye usiku humwe paSimilipal.
ZUVA 06: Similipal
ZUVA 07: Similipal - Kubva
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwemazuva ekufambira kuenda mberi